Iwayini 6.12 iza notshintsho olumalunga nama-354 kunye nophuculo lwemidlalo | Ubunlog
Iwayini 6.12 iza notshintsho malunga ne-354 kunye nokuphuculwa kwemidlalo
Ubumnyama | 06/07/2021 14:11 | Ukuhlaziywa ukuba 06/07/2021 18:30 | software
Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yophuhliso lweWayini 6.12 kwabhengezwa okoko kwaphuma uguqulelo 6.11, Iingxelo ze-42 ze-bug zivaliwe kwaye iinguqu ezingama-354 zenziwe. Le nguqulo intsha ibandakanya imixholo emibini emitsha, ukuphuculwa kwemidlalo kunye nokusetyenziswa, kunye nokulungiswa kwe-bug.
Kulabo abangaziyo ngeWayini, kufuneka bazi ukuba oku Isoftware eyaziwayo nesimahla evulelekileyo evumela abasebenzisi ukuba basebenzise usetyenziso lweWindows kwiLinux kunye nezinye iinkqubo ezinje nge-Unix. Ukuze ubuchwephesha ngakumbi, iwayini Uluhlu lokuhambelana oluguqulela iifowuni zenkqubo ukusuka kwiWindows ukuya kwiLinux kwaye isebenzisa amanye amathala eencwadi eWindows, ngohlobo lweefayile ze .dll.
Isiselo somdiliya yenye yeendlela ezilungileyo zokusebenzisa iiWindows kwiLinux. Ukongeza, uluntu lwaseWayini inedatha yesicelo eneenkcukacha, siyifumana njenge-AppDB iqulethe ngaphezulu kwe-25,000 yeenkqubo kunye nemidlalo, ehlelwe ngokungqinelana kwazo newayini.
1 Luluphi utshintsho olwenziweyo kuhlobo olutsha lwewayini 6.12?
1.1 Uyifaka njani inguqu yophuhliso lwewayini 6.12 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
1.2 Uyikhupha njani iwayini kwi-Ubuntu okanye enye into evela kuyo?
Luluphi utshintsho olwenziweyo kuhlobo olutsha lwewayini 6.12?
Ewe, kule nguqulo intsha yophuhliso ebonisiweyo sinokuyifumana loo nto ngoku kubandakanya iingoma ezimbini "uBlue" kunye "neBlue Blue", ngaphandle koko Ukuphunyezwa kokuqala kwenkonzo ye-NSI kucetyiswa (Ujongano lweVenkile yeNethiwekhi), egcina kwaye igqithise ulwazi malunga nonxibelelwano lwenethiwekhi kwikhompyuter kunye nokuhambisa ezinye iinkonzo.
Tambien yongeze inkxaso ye-32-bit kunye ne-64-bit yokubhalisa kwirejista kwaye umsebenzi owongezelelweyo wenziwe ukuguqula i-WinSock ukuya kumathala eencwadi ngokusekwe kwifomathi ye-PE (ephathekayo enokufezekiseka). Uninzi lwabaqhubi be-setsockopt kunye ne-getsockopt bafuduselwe kwilayibrari ye-ntdll.
Inxalenye umdlalo ezinxulumene neebugs kuyakhankanywa ukuba Imixholo echaziweyo ye-d3d11 yazisiwe (yokubhala imiyalelo yemizobo kwintambo ngaphandle komsonto ophambili wokunikezela) kwi-Diablo 3, Imiphefumlo emnyama 3, Ububi obungaphakathi, u-Elex, Alien: Isolate, kunye ne-Assassin's Creed III.
Ngexesha kwiHeroes III Uphondo lwenzonzobila 1.5.4 ingxaki ye-TCP / IP yalungiswa, kwi-Rainbow Six Siege ingxaki ebangela ukuba i-Uplay isasaze iscreen ukuba ixhomeke, kwi-Sid Meier's Civilization® VI impazamo ekushiye unamathele kwiscreen esingwevu emva kwevidiyo yokuqala.
Njengo ulungelelanise ukuphindaphinda okuninzi kwimidlalo eyahlukeneyo kunye neeapps kunye nesisombululo kwizicelo ezininzi zeDirect2D ezayeka ukusebenza emva kohlaziyo kwiWine 5.10, esuse intengiso ye-ID3D10Device interface kwizixhobo ze-d3d11.
Gqibela ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngale nguqulelo intsha yophuhliso yewayini ikhutshiwe, ungakhangela irejista ye utshintsho kwikhonkco elilandelayo.
Uyifaka njani inguqu yophuhliso lwewayini 6.12 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ukuba unomdla wokuvavanya olu hlobo lophuhliso lwewayini kwi-distro yakho, ungakwenza oko ngokulandela imiyalelo esabelana ngayo ngezantsi.
Inyathelo lokuqala nelona libalulekileyo iya kuba kukuvumela uyilo lwe-32-bitNangona inkqubo yethu ingama-64-bit, ukwenza eli nyathelo kusisindisa kwiingxaki ezininzi ezidla ngokwenzeka, kuba uninzi lweelayibrari zewayini zijolise kulwakhiwo lwe-32-bit.
Ngale nto sibhala malunga nesiphelo sendlela:
Ngoku Kuya kufuneka singenise izitshixo kwaye sizongeze kwinkqubo ngalo myalelo:
Uyenzile ngoku Siza kongeza indawo yokugcina elandelayo kwinkqubo, Ngale nto sibhala kwisiphelo sendlela:
Okokugqibela sinokuqinisekisa ukuba sele siyifakile iwayini nokuba loluphi uhlobo esinalo kwinkqubo ngokwenza lo myalelo ulandelayo:
Uyikhupha njani iwayini kwi-Ubuntu okanye enye into evela kuyo?
Ngokubhekisele kwabo bafuna ukuyikhupha iwayini kwinkqubo yabo nangasiphi na isizathu, Kuya kufuneka benze le miyalelo ilandelayo.
Khipha ingxelo yophuhliso:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Iwayini 6.12 iza notshintsho malunga ne-354 kunye nokuphuculwa kwemidlalo
I-Tux Paint 0.9.26 ifika nezixhobo ezitsha kunye neendlela zokufikelela
IPlasma 5.22.3 ifika ngokulungiswa kwiWayland, X11, ii-applet kunye nentwana yayo yonke into